Ciidamo Huwan Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan Ah Oo Lagu Weeraray Deegaaanno Katirsan Gobolka Hiiraan [Warbixin].
Saturday March 24, 2018 - 21:59:16 in Wararka by Super Admin
Dagaallo u dhexeeya Ciidamada Xabashida Itoobiya iyo shabaabul Mujaahidiin ayaa ka dhacay deegaanno dhowr ah oo ku yaalla duleedka Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan bartamaha Soomaaliya.
Dagaallada oo ka dhacay illaa shan goobood ayaa yimid kadib markii xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ay weeraro la beegsadeen Ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah iyo Jabuutiyaan isugu jira oo dhaq-dhaqaaqyo ka sameynayay deegaannada dhaca Bariga iyo Waqooyiga Balad Weyne.
Ciidamada huwanta oo ka baxay Magaalada Baladweyne ayay Mujaahidiintu waxay weerar kula beegsadeen deegaan lagu magacaabo Yabaryaale oo qiyaastii 30 km dhanka Bariga kaga beegan Baladweyne.
Kolonyada cadawga ah oo sida la sheegay kusii jeeday dhinca Degmada Maxaas ayaa la kulantay ilaa 2 weerar oo kaga yimid dhanka Mujaahidiinta, halkaas oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah cadawga lagu gaarsiiyay.
Maleeshiyaad Soomaali ah oo iyaguna kasoo baxay dhanka Degmada Maxaas ayaa weerar aad u xooggan lagula beegsaday deegaanka Hees.
Dhanka kale Ciidamo iskugu Jira Jabuutiyaan iyo kuwo Soomaali ah oo ku socdaalayay duleedka Waqooyi ee Magaalada Baladweyne ayaa iyaguna la kulmay weerar jidgal ah oo ay u dhigeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay.
Ciidamada ayaa xilliga uu weerarku qabsaday waxaa ay marayeen nawaaxiga deegaan lagu magacaabo Indhacaad waxaana lasoo warinayaa in halkaas khasaare lagu gaarsiiyay.
Wariye Nuur Cali Warsame Abuu Shayba oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa soo sheegaya in mid kamid ah gaadiid dagaal ee cadawga oo kusoo waxyeeloobay dagaalka dib loogu soo celiyay Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.